GoneMAD bụ ihe eji egwu ọdịyo gam akporo | Gam akporosis
GoneMAD bụ ihe ọkpụkpọ ọdịyo nke ị maara; emelitere na interface ọhụrụ
GoneMAD bụ igwe eji egwu egwu abụghị nke ọhụrụ, ma ụbọchị ole na ole gara aga, emelitere ya na ọhụụ ọhụrụ nke dọtara uche anyị. Yabụ ọ bụ oge kachasị mma iji kpọsaa ngwa a nke ị nwere ike ọ maghị.
Ya ọ dịla na Storelọ Ahịa Play maka afọ 4, nke mere na ụbọchị ole na ole gara aga, ọ ruru ụdị nke 3.0 na nke ikpeazụ ya ma ọ bụ nke kwụsiri ike. Ohere na-adọrọ mmasị ịmara onye ọkpụkpọ a na anyị nwere maka ịkwụ ụgwọ na ụlọ ahịa gam akporo, mana site na ụdị ikpe anyị nwere ike ịnwale omume ọma na uru ya.
1 Ihe ngosi ohuru na 3.0 na ihe ohuru
2 Auto DJ na isiokwu di omimi
Ihe ngosi ohuru na 3.0 na ihe ohuru
Ewezuga interface na-atọ ụtọ na nke ọhụụ nke ụdị GoneMAD nke 3.0New atụmatụ dị ka ike isiokwu, Auto DJ, song lyrics nkwado, na ọtụtụ ndị ọzọ na-gụnyere.
GoneMAD Music Player na-ejizi 3.o nke interface ọhụrụ dabere na Nhazi ihe na ụfọdụ mara mma na-enwu gbaa agba gburugburu; nke ahụ bụ ịsị, ha anaghị ahapụ onye ọ bụla. Anyị nwere ohere nke iji n'etiti isiokwu abụọ dị mma maka nke anyị ma wee hazie akụkụ buru ibu nke ihe ọkpụkpọ ọkpụkpọ.
Anyị na-ekwu maka emereme bọtịnụ, na akwụkwọ ahụ aja, album nka, na metadata nke enwere ike igosi na ihuenyo bụ akụkụ nke abụ ndị anyị na-akpọ.
Ọ bụrụ na anyị na-agụta nke ahụ na-enye ọtụtụ nhazi bụ n'ihi na anyị nwere ike ịmebe onwe anyị dị ka album album nke mere na nkuku na-mechie ma ọ bụ ọbụna ọdịdị nke album bụ okirikiri. N'okwu a, eziokwu bụ na GoneMAD bụ ihe ọkpụkpọ ọdịyo nke na-abụghị iji ihe anyị na-emebu, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ya aka na aka pụrụ iche, ọ bụ eziokwu na enweghị ngwa yiri ya.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ kacha mma nke GoneMAD na ụdị ya 3.0:
Omenala igwe ọdịyo
Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Nchekwa onwe DJ
Gam akporo Auto, Chromecast, Replaygain nkwado
Nkwado maka egwu egwu dịka Musixmatch
Auto DJ na isiokwu di omimi
El isiokwu gbara ọkpụrụkpụ gbasara GoneMAD na-ewere agba mbụ album nka nke egwu a na-egwu egwu, ma were ha na ihe dị iche iche nke interface. Ihe na-enye ya isi ihe ọzọ iji mee ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ na, mgbe ụbọchị 14 nke ikpe ahụ gasịrị, anyị nwere ike ịga n'ihu ịkwụ ụgwọ maka ahụmịhe ya na-atọ ụtọ.
Ewezuga ya adabere na Musixmatch maka okwu egwu, na nke ahụ ga-apụta na onye ọkpụkpọ dị ka egwu ahụ na-ada (isi ihe dị mkpa a), ọ na-enyekwa nkwado QuickLyrics.
Kedu ee anyị ọ masịrị ya nke ukwuu bụ Auto DJ ya, na nke ahụ na-elekọta onwe ya ịgbakwunye egwu na kwụ n'ahịrị playback ka anyị wee chefuo na-achọ egwu ma mee ka ha daa.
Maka ndị na-achọ ọkpụkpọ nke na-emelite nka album nke egwu ha na-egwu, GoneMAD na-achọgharị ha na Internetntanetị. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na anyị gụọ na isiokwu ahụ dị ike, nke ahụ ka mma ị ga-ahụ maka ịchọ ya ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ nke ọma iji ya na ekwentị anyị.
Ma ọ bụghị, GoneMAD ghọrọ ihe ọkpụkpọ ọdịyo na-atọ ụtọ ọzọ na ndị ọzọ dị ka PowerAMP; tumadi ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ egwu anyị nke anyị debere na microSD anyị ma ọ bụ na nchekwa ekwentị anyị.
GoneMAD Music Player (Ikpe)
Onye na -emeghe ihe ọkpụkpọ egwu GoneMAD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » GoneMAD bụ ihe ọkpụkpọ ọdịyo nke ị maara; emelitere na interface ọhụrụ
Star Wars: Dinta na-abịa gam akporo mechara nke afọ a